दलान नेपाल : March 2016
मधेशी मोर्चाद्धारा अगामी रणनितीका लागी वृहत छलफल ।
चैत मसान्त सम्मको आन्दोलन घोषणा नहुने ।
बैशाख देखि कडा आन्दोलन गर्ने बताउदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आफनो अगामी रणनिती वारेमा वृहत रुपमा छलफल गरेका छन । मोर्चाको आज बसेको बैठक सरकारलाइ दिएको चैत मसान्त सम्मको अल्टीमेटन सहित अगामी आन्दोलनको रणनिती वारेमा केन्द्रित रहेको सहभागी नेताहरुले बताएका छन । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवासमा झण्डै साढे पाच घण्टा लामो बैठकमा अहिले सम्मको समिकक्षा, मोर्चाको आन्तरिक कमी कमजोरी सहित अगामी दिनमा कसरी प्रस्तुत हुने वारेमा वृहत छलफल भएको थियो । आजको मोर्चा बैठकमा शिर्ष नेताहरु सहित सचिवालयका सदस्यहरु समेत उपस्थित थिए । सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहभागी हुन सकेका थिएन । सदभावना वाट सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण बैठकमा उपस्थित थिए ।
जनकपुरमा अर्का अपराधका 'नाइके' चन्द्रदिप यादव पक्राउ ।
जनकपुर क्षेत्रलाइ अपराधमय बनाउनेहरु मध्येका एक नाइके हिजो राती जनकपुर प्रहरीको नियन्त्रणमा आएको छ । जनकपुरमा घटेको चर्चीत मधयेका एक संचारउद्योगी अरुण सिंघानिया सहित अन्य कयौन घटनामा मुछिएका चन्द्रदिप यादव पछिल्लो समयमा छुटै सशस्त्र समुह बनाएर धनुषा र सिरहालाई टार्गेट गर्दै विभिन्न घटनाहरु घटाएका थिए । गएको माघमा नेपाली काग्रेसको महाधिवेशनको क्रममा धनुषा अधिवेशनको वेला एक स्थानिय नेतालाइ मारे पछि यादवको सशस्त्र समुहको पहिचान प्रहरीले गरेका थिए । त्यस पछि उनको समुहका केहि मानिसहरु पक्राउ परे पछि यीनको वारेमा प्रहरीले सुचना पाएका थिए । काग्रेस अधिवेशनको को क्रममा केहि स्थानिय काग्रसीहरु माथी गोली प्रहार समेत भएको थियो । धनुषा प्रहरीले उनी सहित हिजो राती चार जनालाइ पक्राउ गरेको जनाएको छ । होली पर्व यता जनकपुरको वकिल टोलमा उनको भाइले लिएको घर भाडामा उनीहरु बस्दै आएका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी संगै पक्राउ परेको महिला गएको बैशाख देखि यीनी संगै बस्दै आएका थिए । कल्याणी देवी यादव नाम गरेकी ती महिलाले विहे अन्य पुरुष सग नै सुरुमा गरेको भए पनि गएको वैशाख देखि चन्द्रदीप यादव सग बस्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
मोर्चा घटकहरुका आन्तरिक निष्कर्ष - काठमाडौमा पनि आन्दोलन हुनु पर्यो ।
at 7:15 AM Posted by Dalan
हिजो देखि विराटनगर भएको सदभावनाको विसतारित बैठक
चैत मसान्त पश्चात पुन कडा आन्दोलनमा होमिने बताउदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको घटकहरुले पार्टीगत तहमा मधेश सहित अब काठमाडौ पनि आन्दोलन हुनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन । पछिल्लो केहि समय यता पार्टीगत बैठकहरुमा व्यवस्त देखिएको मोर्चा आबद्ध सवै मधेशी पार्टीहरु यस्तो निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । हिजो र र आज गरी विराटनगरमा सम्पन्न भएको सदभावना पार्टीको समेत त्यस्तो निष्कर्ष आएको उक्त पार्टीका प्रवक्ता संतोष मेहताले बताए । त्यसैगरी आज देखि काठमाडौमा सुरु भएको राष्टिय समाजवादी पार्टी भित्र पनि त्यस्तो आशय देखियो । विस्तारिक बैठकको आरम्भ गर्दै मन्तवय दिने क्रममा उक्त पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले भने, मधेश आन्दोलन मधेशी सहित काठमाडौका लगायतका पहाडमा बस्ने सिमान्तकृत समुदायहरुको समेत भएकाले अव काठमाडौमा समेत आन्दोलन उठाउने तयारी भइरहेको छ ।
मधेशी मोर्चाको बैठक विहिवार बस्दै ।
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक आउदो विहिवार वोलाइएको मोर्चाले जनाएको छ । गएको शनिवार मोर्चाको सचिवालयले अगामी विरोधका कार्यक्रमहरुको मोडल मोर्चाका अध्यक्षहरुलाई दिए पश्चात मोर्चाको बैठक वोलाइएको हो । बैठक विहिवार १ बजे तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भक्तपुर स्थित निवासमा हुने मोर्चाले बताएको छ । यस अघि चैतको पहिलो हप्तामा मोर्चाको बैठक भएको थियो । जुन बैठकले प्रधानमन्त्रीलाइ चैत मसान्त सम्मको अल्टीमेटन दिएको थियो । त्यस यता मोर्चाको सचिवालयले नै निर्णय गर्दै विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । होलीको पुर्व सन्धयामा मोर्चाको सचिवालयले होली नमाउने निर्णय गर्दै होली लगतै सचिवालयले अगामी विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने जनाएका थिए ।
रणनितीक चेपुवामा मधेशी मोर्चा ।
शनिवार बसको मोर्चाको सचिवालय बैठकले अगामी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेन । शनिवार विहान तमलोपा पार्टी कार्यलयमा बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठक अगामी विरोध कार्यक्रमहरु बनाएर आफना अध्यक्षहरु दिए पनि त्यतै रहन गयो । सचिवालयले हालै विरगंज र महोतरीमा भएको घटनाको वारेमा विज्ञप्ति निकालेर आफनो नियमित कामवाट पन्छिए । मोर्चाका सचिवालयमा रहेका नेताहरुका अनुसार अगामी चैत मसान्त सम्मका लागी मुख्य गरी दुई ओटा कार्यक्रमहरु बनाइएको थियो । पहिलो हरेक जिल्ला सदरमुकामहरुमा आन्दोलन वारे अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम र अर्को मधेशका प्रमुख सहरहरुमा ६ ओटा आमसभाहरु । जसमध्ये ३ ओटा आमसभा सदरमुकाममा र ३ ओटा राजमार्गमा गर्ने सचिवालयको निष्कर्ष थियो । शिर्ष नेताहरुसंग सल्लाह पश्चात शनिवार नै घोषणा गरिने भनिएको मोर्चाको थप विरोध कार्यक्रमहरु वारे उक्त दिन सचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिमा एक वाक्य पनि उल्लेख गरिएनन । जवकि बाहिर गएको ११ चैतमा भारतीय राजदुत संग भएको मोर्चाका नेताहरुको भेटलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रियात्मक समाचारहरु वाहिर आइरहेका छन । होलीको शुभकामनाको लागी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु बोलाइएको भनिएको उक्त भेटको वारेमा मोर्चाका नेताहरु मुख खोल्न चाहिरहेका छैन ।
मोर्चा द्धारा भोली चैत मसान्त सम्मको विरोध कार्यक्रम घोषणा हुदै ।
at 6:36 AM Posted by Dalan
सरकारलाई चैत मसान्त सम्मको अल्टीमेटन दिएको आन्दोलन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भोली शनिवार यो महिना सम्मको लागी आफना विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छन । शनिवार विहान ७ वजे तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी कार्यलयमा मोर्चाको सचिवालयको बैठक वोलाइएको छ । सचिवालयले त्यही आफना शिर्ष नेताहरु संग छलफल गरेर यो महिना भरीका लागी आफनो विरोध कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने सचिवालयका नेताहरुले जनाएका छन । माघको अन्तिम हप्ता ६ महिना लामो बन्द र नाका केन्द्रित आन्दोलनको कार्यक्रमहरु फिर्ता लिए पछि मोर्चाले आन्दोलन जारी राख्नका लागी विभिन्न किसिमका विरोध कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
कुन नैतिक आधारमा मिनापले हरेक बर्ष जीवनाथ चौधरीलाइ सम्मान गर्छन ?
at 5:51 AM Posted by Dalan
अघिल्लो बर्ष महामुर्ख सम्मेलनमा सम्मानित भए पश्चात सामुहिक तस्वीर खिचाउदै जीवनाथ चौधरी
होलीको अवसरमा जनकपुरमा आयोजना गरिने महामुर्ख सम्मेलन देशैभरी प्रसिद्ध छन । मिथिला क्षेत्रको सांस्कृति अभियानमा अग्रणी भुमिका खेलेको दावी गर्ने मिथिला नाटय कला परिषद, मिनाप यसका आयोजक हुन । मिनापले मिथिला क्षेत्रवाट उच्च तहको बौद्धिक काम गर्ने जनालाई हरेक बर्ष छनौट गरेर महामुर्ख सहित विभिन्न व्यंगात्मक पदवी वाट समाजिक सम्मान गर्ने चलन छ । जुन मिथिला क्षेत्रमा चर्चीत पनि छन । मिथिला नाटय कला परिषदकै भनाइलाई यदी सत्य मान्ने हो भन्ने विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई वर्ष पिच्छै छानेर यो पदवीवाट समाजिक सम्मान दिने चलन छ । पछिल्लो चार बर्षको रेर्कड हेर्ने हो भन्ने महामुर्ख सहित अन्य सवै पदवीवाट विभिन्न व्यक्तिहरु सम्मान भए पनि जनकपुरका नामुद भुमाफिया जीवनाथ चौधरी हरेक बर्ष यो लिष्टमा देखिन्छ, र सम्मान ग्रहण गर्छन । यो संवाददाताले फेला पारेको पछिल्लो चार बर्षको मिनापको सम्मान लिष्टमा चौधरी एक मात्र यस्ता भाग्यमानी जनकपुरका नामुद प्रसिद्ध व्यक्ति छन जो मिनापको नजरमा सधै देखिएका छन, जो हरेक बर्ष यो १० ओटा सम्मानित पात्र मध्येका एक हुन । मिनाप खासगरी सम्मनित व्यक्तिहरु छनौटका लागी एउटा समिती नै बनाउने चलन रहेको जनकपुरका स्थानिय जानकारहरु बताउछन । तर अचम्म त के छ चौधरी यो छनौट समितीको लिष्टमा हरेक बर्ष पर्ने गरेको देखिन्छ । मिनाप र रामनन्द युवा क्वलको सुरुवाती कामहरुले जनकपुर क्षेत्रमा मिथिला संस्कृतिको प्रवद्धनमा ठुलो योगदान पुर्याएको स्थानिय अगुवाहरु वताउछन । तर अचम्म त के भन्ने विभिन्न काण्डमा मुछिएका चौधरीको सार्वजनिक जीवन पनि यही क्लवहरुले वनाएको देखिन्छ ।
अर्को हप्ता देखि मोर्चाले प्रचारात्मक अभियान तीव्र बनाउने ।
at 6:44 AM Posted by Dalan
सरकारलाई चैत मसान्त सम्मको अल्टीमेटन दिएको आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अगामी हप्ता देखि प्रचारात्मक अभियानलाई तीव्र बनाउने आन्तरिक तयारी सुरु गरेका छन । गएको ७ गते सम्मको विरोध कार्यक्रम सिद्धए पश्चात मोर्चाले होली पछि थप विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न जनाएका थिए । चैत मसान्त नजिकदै जादा मोर्चाले अगामी आन्दोलनका लागी मधेशका जिल्लाहरुमा विभिन्न तरिकाका प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु बनाउन लागेको जनाएको छ । माघको अन्तिम हप्ता बन्द हडताल र नाका केन्द्रित कार्यक्रम फिर्ता लिएर आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गरेको जनाएको मोर्चाले चैत मसान्त सम्म आफनो माग पुरा नभए पुन कडा आन्दोलनमा जाने बताएका थिए ।
उपेक्षाको सिकारमा ऐतिहासिक 'मिथिला परिक्रमा'
at 5:25 AM Posted by Dalan
बुधवार विहानै जनकपुरमा लाखौको सहभागीमा हुने अन्तगृह परिक्रमा पश्चात यस पटकको १५ दिने मिथिला परिक्रममा सम्पन्न हुने छ । १५ दिन अघि जनकपुरको हनुमाननगर वाट सुरु भएको मिथिला परिक्रममा धनुषा, महोत्तरी सहित भारतको समेत कयौन धामहरु पुग्दै मंगलवार पुन जनकपुर आइ पुगेका हुन । संसकृतिविदहरु मिथिला परिक्रममालाई विश्वमै हाल रहेको जिवित रहेको एक मात्र अलौकिक परम्परागत चलनको रुपमा अर्थयाउछ । अर्को महत्वपुर्ण पक्ष त के छ भन्ने यो नेपाल र भारत दुवै देश विचको संस्कृति सम्बन्धलाई समेत यसले झल्काउछन । तर यसको विजोग चाही दनीयय अवस्थामा छ । जनकपुर वाट सूरु हुने १५ दिने परिक्रममा अन्र्तगत १३३ किलो मिटर दुरी यात्रीहरु पैदल मार्ग मार्फत गर्छन । जुन जनकपुर सहित स्थानिय महत्व बोकेका धामहरु हुदै सम्पन्न हुन्छन । बर्षै पुरोनो मान्यता रहेको यो परिक्रममाको हाल सम्म भन्ने कुनै व्यवस्थतीत गर्न नसकिएको देखिन्छ नत कुनै ठोस योजना मुताविक यसको विकास कार्यक्रम अगाडी वढाइएको छ । जसका कारण आउदो केहि दशकमा यो परम्परा लोप त नहुने हो भन्ने चिन्ता पनि त्यस क्षेत्रका संस्कृतिविद्धहरुमा व्याप्त देखिन्छ ।
राजनितीक सिकारको चपेटा
मधेशी मोर्चा द्धारा होली नमनाउन अपिल ।
मोर्चाको सचिवालय बैठक । फाइल फोटो
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले जारी मधेश आन्दोलनको क्रममा प्रहरी द्धारा मधेशमा व्यापक जनधनको क्षती भएको भन्दै यस्तो शोकाकुल अवस्थामा होली पर्व नमाउन सवैमा आग्रह गरिएको छ । मोर्चाको सचिवालयले सोमवार विज्ञिप्ती निकालेर मधेशमा आन्दोलनको क्रममा ५० जना भन्दा वढी मारिएको र हजारौको संख्यामा धाइतेहरु अझै उपचारार्थ रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा रड र अविर लगाएर उल्लासको वातावरण निर्माण गर्न नसकिने बताएको छ । मोर्चाले गएको साउन देखि नयां सविद्यानको कयौन मुद्धाहरुमा असहमती राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन ।
प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणलाई नजिकवाट मधेशी मोर्चा नियाल्दै ।
at 6:40 AM Posted by Dalan
प्रधानमन्त्री आज चिन गएकै दिन उनको पुतला मधेशका जिल्लाहरुमा जलाइएको छ ।
आइतवार एक हप्ते उत्तरी छिमेकी मुलुक चिनको भ्रमणमा गएको प्रधानमन्त्रीको यात्रालाई आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले नजिकवाट नियालीरहेको जनाएको छ । चैत मसान्त सम्मको अल्टीमेटन दिएको मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमण कस्तो हुन्छ त्यसतै आधारमा आफनो अगामी रणनिती वनाउने आन्तरिक तयारीमा रहेको जनाएको छ । गएको शुक्रवार मात्रै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनले चिनिया राजदुतलाइ भेटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको भ्रमणको वेला महत्वपुर्ण सम्झौताहरु नगर्न आग्रह गर्दै मधेशको मुद्धामा कुटनितीक दबाब सिर्जना गरिदिन आग्रह गरेको थियो । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चैत मसान्त सम्मको एक महिना अल्टीमेटन दिए लगतै आज सम्मका लागी आफनो जारी दबाब मुलुक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर मोर्चाका दुई शिर्ष नेताहरु दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए । मोर्चाका दुई शिर्ष नेताहरु दिल्लीवाट फक्रिएकै दिन चिनिया राजदुतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चिन भ्रमणको सम्बन्धमा आफनो मागहरुको वारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मधेशको मुद्धा वारे चिनिया राजदुतलाई ध्यानाकर्षण ।
ठाकुर र यादव दिल्लीवाट फर्के ।
मधेशको मुद्धा वारे चिनिया राजदुतलाई ध्यानाकर्षण गराउदै मोर्चा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चिन भ्रमणको पुर्व सन्धयामा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा सहितको संघिय गठवन्धनले आज नेपालका लागी चिनिया राजदुतलाइ मधेशी जनजातीहरुको मुद्धाको वारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन । प्रधानमन्त्री ओली आउदो ७ गते चिन भ्रमणमा जादै छन । आन्दोलन मोर्चा र गठवन्धनले ओली नेतृत्वको सरकारले जारी आन्दोलनको माग सम्बोधन नगरेको र आन्दोलनको क्रममा मधेशमा व्यापक रुपमा मानव अधिकारको हनन गरिएको भन्दै आन्दोलनको पक्षमा मित्र राष्टको नाताले आवाज उठाइ दिन आग्रह गरिएको छ । दुई पेज लामो लिखित आफनो आग्रह पत्र बुझाउदै मोर्चाले चिनिया राजदुत मार्फत चिन सरकारलाई यसको वारेमा ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
सेनापतिले किन दिए यस्तो सन्देश ?
मधेश आन्दोलनले मुलुक पुर्ण रुपमा प्रभावित देखि रहदा सेनापतिको यस्तो सन्देश आफैमा महत्वपुर्ण देखिन्छ ।
‘देश नै टुक्र्याउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएमा सरकारको निर्देशानुसार विधिसम्मत् तरिकाले नेपाली सेना स्वत परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका अवाञ्छित गतिविधिको नेपाली सेनाले नजिकबाट सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन र विश्लेषण गरी सोही अनुसारको रणनीति तयार गरिरहेको छ ।’
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेना दिवसका अवसरमा मातहतका सकल दर्जालाई २३ फागुनमा गरेको सम्बोधनको अंश हो यो । र, यही सम्बोधन उनले सोही दिन पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा पनि दोहोर्याए । ती सम्बोधनमा उनले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र तात्कालिक सुरक्षा अवस्थाको चित्रणसँगै सन्निकट संकटतर्फ पनि संकेत गरेका छन् । र, त्यसका लागि तयार रहन मातहतको फौजलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानसेनापति क्षत्रीको यो भनाइ यस्तो समयमा आएको छ, जतिखेर मुलुकले संविधानको कार्यान्वयनमा जटिलता सामना गरिरहेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, केही क्षेत्रीय दलको आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाहरूका कारण जनजीवन असहज भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दल, सामाजिक समूह र क्षेत्रीय संगठनहरूबीच नयाँ प्रकारले ध्रुवीकरण भइरहेको छ । र, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि सहज बन्न सकेको छैन । यस्तोमा सेनापतिले मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामै खतरा औँल्याउँदै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
किन बोले सेनापति ?
ठाकुर र यादव दिल्लीवाट आज फर्कदै ।
गएको आइतवार दिल्ली गएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आज अवेर राती काठमाडौ फर्कदै छन । मंगलवार नै फर्कने अघि दिल्ली उडेका आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका यी दुई शिर्ष नेताहरु केहि महत्वपुर्ण भेटघाटका कारण आफनो पुर्ववत निर्धारित कार्यक्रम भन्दा एक दिन ढिला आज फर्कदै छन । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मंगलवार ठाकुर र यादवको भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसंगको बैठक तय भए पछि यीनीहरु आफनो पुर्व फर्कन कार्यक्रम रद्ध गरेका थिए । सोमवार दिल्लीमा भएको एउटा अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने मुख्य उदेश्यका साथ दिल्ली गएका मोर्चाका दुई जनै शिर्ष नेताहरु भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज संगै गृहमन्त्री राजनाथ सिंह लगायत अन्य राजनितीक भेटघाट गरेको उनीहरु निकटस्त स्रोतको भनाइ छ । त्यो संगै मोर्चाका नेताहरु दिल्ली स्थित नेपाली राजदुतले आयोजिना गरेको डिनर मिटिंगमा समेत सहभागी भएका थिए, जाहा भारतीय कुटनितीज्ञहरुको समेत उपस्थित थियो ।
मधेशी मोर्चाले चिनिया राजदुतलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
at 6:27 AM Posted by Dalan
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्भावित चिन भ्रमणलाई लक्षित गरेर नेपाल स्थित चिनिया राजदुतलाई मधेशको समस्या वारेमा ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार त्यसका लागी चाडै काठमाडौ स्थित चिनिया राजदुत संग समय मागिने छन । मोर्चाले प्रधानमन्त्री ओली चिन जान लाग्दा मधेश आन्दोलनको मुद्धाहरु र मधेशीहरुले ६ महिना भन्दा लामो समय देखि गरिरहेको आन्दोलनको वारेमा जानकारी गराउदै ध्यानाकर्षण गराउने कर्णले बताए । कर्णले भने, हामीले नेपालमा सक्रिय सवै विदेशि शक्तिहरुलाइ आफनो मुद्धा र समस्याको वारेमा जानकारी गराउदै आएका छौ, सरकारी पक्ष हाम्रो मुद्धा प्रति संवेदनशिल अझै देखिएका छैनन, यस्तो परिपेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री आली चिन जादै छन, त्यसैले हामी आफनो समस्या र नेपालको यर्थात अवस्था वारेमा काठमाडौ स्थित चिनिया राजदुत मार्फत चिन सरकारलाई अवगत गराउने छौ । प्रधानमन्त्री ओली आउदो ७ गते चिन भ्रमणमा जादै छ ।
ठाकुर र यादवको दिल्ली यात्रा लम्बियो ।
at 6:47 AM Posted by Dalan
भोली मंगलवार फर्किने गरी हिजो आइतवार दिल्ली पुगेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका प्रमुख दुई शिर्ष नेताको यात्रा लम्बिएको छ । एउटा अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन हिजो तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित मोर्चाका केहि प्रमुख नेताहरु दिल्ली पुगेका थिए । ठाकुर र यादव आज सोमवार दिल्लीमा आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । दिल्लीमै रहेका एक मधेशी नेताका अनुसार मोर्चाका दुई शिर्ष नेताहरुको हुने सम्भावित केहि उच्चस्तरीय बैठकका कारण ठाकुर र यादवको भोली मंगवलवार फर्कने कार्यक्रम रद्ध गरिएको छ । स्रोत भन्छन, हिजो उहाहरु दिउसो त्याहा पुग्नु नै भयो, आज दिनभरी कार्यक्रममै व्यस्त रहनु भयो, उता भेटघाटको कार्यक्रम भोली देखि केहि हुने भएकाले ठाकुर र यादव आफनो पुर्व निर्धारित फर्कने कार्यक्रम रद्ध गरेका छन ।
मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्लीमा ।
at 6:04 AM Posted by Dalan
प्रधानमन्त्रीलाई अल्टीमेटन बुझाए लगतै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका प्रमुख केहि शिर्ष नेतृत्वहरु दिल्ली गएका छन । आइतवार विहान दिल्ली गएका मोर्चाका शिर्ष नेताहरु त्याहा सोमवार हुने एउटा अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने छन । जारी मधेश आन्दोलनकै सन्दर्भमा दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तक्रियामा मोर्चाका शिर्ष नेतृत्वहरु सहित काग्रेस, एमाले, एमाओवादी सहित नया शक्तिका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी छन । नागरिक समाजका केहि अगुवाहरु समेत उक्त कार्यक्रमकै लागी दिल्ली पुगेका छन । मोर्चाका सवै अध्यक्षहरुलाइ निम्तो भए पनि सबै अध्इक्षहरु गएका छैनन । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र सहितका केहि प्रमुख मधेशी नेताहरु मात्रै गएका हुन । उक्त कार्यक्रमकै लागी भनेर विभिन्न मधेशी पार्टीहरु सक्रिय प्राय जसो सवै प्रमुख महिला नेतृहरु पनि त्याहा पुगेका छन ।
प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई भने- एक दुई दिनमै उपचार खर्च र मुद्धा फिर्ता हुन्छ ।
at 6:09 AM Posted by Dalan
शुक्रवार वेलुकि प्रधानमन्त्री निवासमा मोर्चा र सरकार विच भएको छलफलमा सरकारको तर्फ वाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक दुई दिनमै मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको धाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन । मोर्चाका नेताहरुका अनुसार सरकारी पक्षले मोर्चाको राजनितीक मुद्धामा छलफल नगरे पनि धाइतेहरुको उपचार खर्च, तराइ मधेशमा आन्दोलनको क्रममा लगाइएको मुद्धाहरु फिर्ता र न्यायिक छानिवन समितीको वारेमा दुवै पक्ष विच साकारात्मक छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन, केहि मिडयामा आए जस्तो मलाई र कानुनमन्त्रीलाइ कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन, यद्यपी प्रधानमन्त्रीले दुइ चार दिन यी कुरा आफुले मोर्चा संग सल्लाह गरेर गर्ने वचनवद्धता जनाउनु भएको छ । कर्णका अनुसार आउदो मन्त्रीपरिषदको बैठकवाट प्रधानमन्त्रीले यी कामहरु गर्ने वताएका थिए ।
राजनितीक मुद्धामा कुनै छलफल भएन ।
चैत मसान्त सम्मको मोर्चा द्धारा प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटन ।
at 6:55 AM Posted by Dalan
अल्टीमेटन सहितको आफना मागहरुको वारेमा ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउदै तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आफना मागहरु सम्बोधन गर्नका लागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ चैत मसान्त सम्मको अल्टीमेटन दिएको छ । शुक्रवार विहान प्रधानमन्त्रीको निवास वालुवाटार पुगेर मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई चार पेज लामो ध्यानाकर्ष पत्र बुझाउदै चैत मसान्त भित्र मधेश आन्दोलन सम्बोधन नभए पुन कडा आन्दोलनमा उत्रने जानकारी समेत गराएका छन । मोर्चाको तर्फ वाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अल्टीमेटन सहितको ध्यानाकर्षन पत्र बुझाएका छन । मोर्चाले शुक्रवार बुझाएको ध्यानाकर्षनमा उनले अघि सारेको ११ बुदे माग सहित गएको श्रावण मसान्त देखि मधेशमा भएको आन्दोलनको क्रममा मृत्यू भएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नु पर्ने, धाइतेहरुको उपचार खर्च व्योहोर्ने पर्ने, ६ महिना लामो बन्दको सम्पुर्ण कर मिनहा गर्नु पर्ने सहित कालाबजारी नियन्त्रण देखि भुकम्प पिडितहरुको पुर्नवासको समेत माग गरिएको छ । साथै मोर्चाले आन्दोलनको क्रममा राज्यद्धारा भएको दमनको छानविन गर्न न्यायीक छानविन समिती र तराई मधेशमा आन्दोलनको क्रममा प्रशरी प्रशासनले लगाएको मुद्धा फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई मोर्चाले शुक्रवार ध्यानाकर्षण गराउदै ।
at 5:13 AM Posted by Dalan
आन्दोलनको स्वरुप वदलेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भोली शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ आफना मागहरुको वारेमा ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन । मोर्चाको विहिवार बसेको बैठकले शुक्रवार ९ वजे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताए । लालका अनुसार मोर्चाले मधेशको मागहरुको वारेमा ज्ञापन पत्र बनाएर भोली सरकारी पक्षलाइृ ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन ।
सदभावना बैठकमा 'भारतीय भुमिका’ प्रति तिखो आलोचना ।
at 5:15 AM Posted by Dalan
यही महिनाको सुरुमा अर्थात ७ देखि १० फागुन सम्म बसेको सदभावना पार्टीको कार्यसम्पादन समितीको बैठकमा मधेश आन्दोलनको क्रममा भारतीय पक्षको भुमिकालाई लिएर चर्को प्रश्नहरु उठेको नेताहरुले बताएका छन । माघको अन्तिम हप्ता मधेशी मोर्चाले ६ महिना लामो आमहडताल र नाका केन्द्रित कार्यक्रम फिर्ता लिदै आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गरेको थियो । मोर्चाको त्यही बैठकले सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको भुमिकालाई नाकारात्मक भन्दै सचेत समेत गराएको थियो । त्यही परिपेक्ष्यमा सम्रग समिकक्षाका लागी डाकिएको सदभावनाको कार्यसम्पदानको बैठकको छलफलको मुख्य मुद्धा नै भारतीय भुमिका बन्न पुग्यो । बैठकमा सहभागी नेता भन्छन, चार चलेको बैठक मध्ये तीन दिन सम्म शिर्ष वाहेकका अन्य सवै नेताहरुले भारतीय भुमिकालाई लिएर शिर्ष नेताहरु संग एक पछि अर्को प्रश्नहरु तेर्साउन थाले पछि तेस्रो दिनमा शिर्ष नेताहरुले त्यसलाई थामथुम पारेका थिए । शिर्ष वाहेक अन्य सदभावनाका प्रायजसो सवै नेताहरुले भारतीय भुमिका प्रति गरेको प्रश्नमा भने शिर्ष नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन । वरु तेस्रो त्यसलाइ थामथुम पार्ने प्रयास गरे । बैठक स्रोत भन्छन, शिर्ष नेताहरु यस विषय थप कुरा अघि नवढाउन भन्दै त्यो पार्टी जीवनका लागी र हामी नेताहरुको राजनितीका लागी स्वस्थकर नहुने बन्दै उक्त विषयलाई विषयान्तर गरेका थिए ।
काग्रेस कोषाध्यक्षमा सितादेवी यादव निर्वाचित ।
नेपाली काग्रेसको अगामी नेतृत्वका लागी भएको निर्वाचनमा सिरहाकी सितादेवी यादव काग्रेसको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छिन । सिरहाकै पुर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई ८ मतले पराजीत गर्दै सितादेवी काग्रेसको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन । चित्रलेखा यस अघि काग्रेसको कोषाध्यक्ष थिइन । संस्थापन पक्ष भनेर चिनिएका राम चन्द्र पौडेलको तर्फवाट उम्मेदवार बनेकी सितादेवी काग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित शेर बहादुर देउवा पक्षकी उम्मेदवार चित्रलेखालाई पराजीत गरेकी हुन । चित्रलेखा नेपाली काग्रेसको राजनिती भित्र केन्द्रिय तहका परिचित नाउ भए पनि सितादेवी खासै परिजित नाउ थिइन । यद्यपी अघिल्लो महाधिवेशनताका उनी काग्रेसको एक मात्र महिला सभापति भनेर चर्चामा आएकी थिइन ।
को हुन् सीतादेवी
चैतको तेस्रो हप्ता देखि पुन आमहडताल गर्ने तयारीमा मधेशी मोर्चा ।
at 5:59 AM Posted by Dalan
पछिल्लो समयमा मधेश दौडाहामा रहेका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आइतवार अचानक भारतको वनारस तिर लागेका छन ।
माघको अन्तिम हप्ता ६ महिना लामो आमहडताल र नाका केन्द्रित विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिएको आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आउदो चैतको तेस्रो हप्ता देखि पुन आमहडताल गर्ने तयारी आन्तरिक रुपमा गरीरहेको छ । मोर्चा स्रोतका अनुसार मोर्चाले अघि सारेको ११ बुदे मागको वारेमा प्रमुख दलहरुले अहिले सम्म कुनै ठोस धारण नल्याएर सहमती गर्ने छाटकाट नदेखाएको भन्दै पुन आमहडताल सहित कडा आन्दोलनमा जाने तयारीमा मोर्चा अघि वढेको छ । आन्दोलनको स्वरुप वदलेको बताउदै आएको मोर्चा अहिले पनि साकेंतिक रुपमा विभिन्न विरोध कार्यक्रमहरु तराई मधेशमा गर्दै आएका छन । मोर्चा स्रोतका अनुसार चैतको पहिलो हप्तामा मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई अल्टीमेटन सहित ज्ञापन पत्र दिने तयारी गरेको छन । मोर्चाको पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतीका लागी एक चोटी ध्यानाकर्षण स्वरुप अल्टीमेटन दिने निर्णय गरेको थियो ।
५२ वर्षपछि दुर्गानन्द झा सहिद घोषित
तत्कालीन सरकारले मृत्युदण्ड दिएका दुर्गानन्द झालाई ५२ वर्षपछि फागुन १९ गते सहिद घोषणा गरिएको छ । पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले पञ्चायत लादेको आक्रोशमा बम प्रहारको अपराधमा फाँसीको सजाय पाएका झालाई सरकारले आधिकारिक रुपमा सहिद घोषणा गरेको छ । झाका परिवारसहित सरोकारवालाले समेत झालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । झाको योगदानको संस्मरणमा जनकपुर हरेक वर्ष माघ १५ गते बलिदानी दिवस मनाइन्छ ।
गणतन्त्रका लागि २०१८ माघ ९ गते जनकपुरमा जानकी दर्शन गर्न पुगेका तत्कालीन राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेकामा पक्राउ नपरेका २० वर्षीय झाले निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि पछि आफूलाई समर्पित गरेका थिए । बम प्रहार गरेर फरार भएका झालाई भागेकामा छटपटी र पश्चाताप भएको थियो । क्रान्ति गर्ने तर भागी भागी लुक्ने भन्दै उनले तीन महिनापछि गिरफ्तारी दिए ।
नेपाली काग्रेसको नजरमा ‘मधेश’ ।
पछिल्लो समयमा पुन एकपटक मधेशको नेपालको राजनितीको केन्द्रमा छ । पछिल्लो समयमा नयां संविद्यानको कयौन प्रावधानहरु प्रति असन्तुष्टि जनाउदै आन्दोलित भएको मधेशको वारेमा सवै पक्ष आ आफनो ढंगले त्यस लाइ हेर्ने गर्छन । हाल जारी संसदको सवै भन्दा ठुलो पार्टी काग्रेसको महाधिवेशनमा पनि मधेशको मुद्धा प्रमुखताको साथ महत्व पाएको देखिन्छ । अध्यक्षको सवै आकाक्षीले आफुले जितेमा सवै भन्दा पहिला मधेश समस्या सामाधान गर्ने जनाएका छन । काठमाडौमा विहिवार देखि सुरु भएको काग्रेसको महाधिवेशनमा शुक्रवार पार्टी निती र कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यवाह सभापति रामचन्द्र पौडलको तर्फ वाट प्रस्तुत भयो । काग्रेसको अधिकारिक राजनिती धारणा बोक्ने उक्त प्रतिवेदनमा समेत जारी मधेश आन्दोलन र मधेशको समस्या वारेमा प्रमुखताका साथ कुरा उठेको देखिन्छ । शनिवार अवेर राती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु वोले पछि उक्त प्रतिवेदन पास भएको छ । २६ पेज लामो काग्रेसको उक्त राजनितीक प्रतिवेदेनमा मधेशको वारेमा के भनिएको छ वा अवको नेपाली काग्रेस मधेशलाई कसरी हेर्ने छ भन्ने कुराको प्रमुख आधार यही हुने छ ।
काग्रेसको नजरमा मधेश
नेपाली काग्रेस भित्रको ‘मधेश हुरी’
यो फोटो पहिलोपोष्ट डटकमवाट साभार गरिएको छ ।
गएको वुधवार नेपाली काग्रेस आफनो महाधिवेशनको अन्तिम तयारी भएको काठमाडौमा घोषणा गरीरहदा महोतरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा स्थानिय काग्रेसी नेताहरु सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णको हाथ वाट टिका थाप्दै सदभावनामा प्रवेश गर्दै थिए । त्यसैगरी विहिवार काठमाडौको टुडिखेलमा काग्रेसले महाधिवेशन उदघाटना चलीरहदा पर्साको विरगंजमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हाथवाट टिका थाप्दै विरगंजका स्थानिय प्रभावशाली काग्रेसीहरु फोरम पार्टीमा प्रवेश गर्दै थिए । पछिल्लो समयमा नयां संविद्यानको विरोधमा मधेशमा उठेको आन्दोलन संगै काग्रेस सहित प्रमुख पार्टीहरुको मधेशमा व्यापक विरोध र आलोचनाहरु भइरहेको देखियो । आन्दोलनको क्रममा प्रमुख पार्टी स्थानिय नेताहरु धमाधम पार्टी परित्याग गरेर मधेश केन्द्रित पार्टीहरुमा प्रवेश समेत गर्न थाले । जुन क्रम अझै जारी देखिन्छ । महाधिवेशनको पुव सन्धयामा काग्रृसका एक जना प्रभावशाली मधेशी सांसद तथा नेता सुरेन्द्र चौधरीले पनि पार्टी र संसद दुवै वाट परित्याग गरेका छन । चौधरी मधेश आन्दोलन सुरु हुनु भन्दा पुर्व देखि नै मधेश मुद्धा सम्बोधन हुनु पर्ने आवाज पार्टी भित्र उठाउदै आएका थिए ।
मधेश थेग्न गाहे ।
नितिश कुमारले मधेशी नेताहरु संग भने - काग्रेस,एमालेका मधेशी सभासदले किन संविद्यानमा हस्ताक्षर गरे ?
at 5:22 AM Posted by Dalan
सिमाकंन र नागरिकता प्रति विशेष चासो
भारतको विहार प्रान्तका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले नयां संविद्यान प्रति जारी मधेश आन्दोलन प्रति गम्भिर चासो व्यक्त गर्दै त्यसको वारेमा मधेशी मोर्चाका नेताहरु संग विहिवार भेटवार्ता गरेका छन । नेपाल काग्रेसको महाधिवेशनमा अतिथी बन्न वुधवार काठमाडौ आएका नितिश कुमार हिजो देखि राजनितीक भेटघाटमा समेत गरेका छन । विहिवार विहान पौनौ दश बजे देखि एघार वजे सम्म मोर्चाका नेताहरु संग द्धारिका होटलमा भेटेका उनी संघियताको सिमाकंन र नागरिकताको वारेमा विशेष चासो समेत देखाएको भेटमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन । नितिश कुमार संगको भेटमा मोर्चाको तर्फ वाट फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राई, तमलोपा उपाध्यक्ष बृषेशचन्द्र लाल, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहित अन्य अध्यक्षहरु सहभागी थिए । भेटको क्रममा नयां सविद्यानको घोषणाको सेरोफोरोमा तराई मधेशमा उठेको आन्दोलनको विभिन्न पक्षको वारेमा कुराकानी भएको नेताहरुले बताएका छन । तराई मधेशको सिमावर्ती क्षेत्र समेत पर्ने विहारको मुख्य मन्त्रीले नेपालको मधेशी समुदायहरु संग भएको विभेद वारेमा आफहरुले जानकार भएको भन्दै आन्दोलनमा सवै मधेशी पक्षहरुलाइ एकतावद्ध भएर अघि किन वढन नसकेको भन्दै जिज्ञासा राखेको नेताहरुले बताएका छन ।
काग्रेस महाधिवेशन लगतै मोर्चाका सबै अध्यक्षहरु दिल्ली जादै ।
at 5:00 AM Posted by Dalan
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध सात ओटै पार्टीका अध्यक्षहरु नेपाली काग्रेसको महाधिवेशन भए लगतै अर्को हप्ता दिल्ली भ्रमणमा जादै छन । १४ मार्चमा भारतको राजधानी दिल्लीमा हुने एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको मोर्चाका सबै अध्यक्षहरु चार दिन सम्म दिल्लीमा रहने मोर्चा उच्च स्रोतले जनाएका छन । भोली देखि काठमाडौमा नेपाली काग्रेसको महाधिवेशन हुदैछ । काग्रेसको महाधिवेशन पश्चात राजनितीक खिचडी नयां ढंगले पाक्ने आकंलन चौतर्फी भइरहदा मोर्चाका सबै अध्यक्षहरुको दिल्ली भ्रमणलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । अर्को हप्ताको आइतवार काग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुदैछ । मोर्चाका सवै अध्यक्षहरु १२ मार्चा अर्थात त्यस पछिको आउदो शनिवार दिल्ली भ्रमणका लागी उडने तयारी रहेको नेताहरु बताउछन । मोर्चाका अध्यक्षहरु १५ मार्चमा काठमाडौ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । १५ मार्च अर्थात २ चैतमा मोर्चाका अध्यक्षहरु काठमाडौ फर्के पछि मात्रै मोर्चाले हालै निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रम राखिने छ ।
मोर्चा सचिवालय द्धारा गृहकार्य सुरु ।
at 5:11 AM Posted by Dalan
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आफनो सचिवालयलाइ दिएको जिम्मेवारी अनुरुप सचिवालयले आफनो काम सुरु गरेको जनाएको छ । आन्दोलन स्वरुप परिर्वतन गरेको मोर्चाले भावी आन्दोलनका लागी रणनिती बनाउने जिम्मा सहित प्रधानमन्त्रीलाई दिने ज्ञापनपत्र समेत बनाउन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसको साथै सचिवालयले मोर्चाले आचारसंहिता सहित नयां ढंगले बनाउने जिम्मा पाएका थिए । मंगलवार सदभावना पार्टी कार्यलयमा बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई दिने ज्ञापन पत्र सहित अन्य सवै विषयमा छलफल गरेको नेताहरुले जनाएका छन । बैठक भोली विहान ११ बजे पुन तमलोपा पार्टी कार्यलयमा बस्दै छन । आजको बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाइ दिने ज्ञापनपत्र तमलोपा उपाध्यक्ष तथा सचिवालय सदस्य वृषेशचन्द्र लाल लाइ लेख्ने जिम्मा दिएका छन । लालले भोलीको बैठकमा उक्त ज्ञापनपत्रको खाका प्रस्तुत गर्ने छ । मोर्चाले बुझाउने ज्ञापनपत्रमा ११ बुदे माग सहित, आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको सहित घोषणा, धाइतेहरुको उपचार खर्च र क्षतीपुर्ती सहित कालो वजारी रोक्न विषय समेत समिेटिने छ । त्यसैगरी मोर्चाले बुझाउने ज्ञापनपत्रमा भुकम्प पिडितको पुर्नवासको विषयलाई समेत उठाउने छन । यसको साथै सचिवालयले मोर्चाको ०७१ मै बनेको आचारसंहितालाई परिमार्जन गर्नुको साथै अगामी केहि हप्ताका लागी विरोध कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन ।